20 Ecommerce Strategies iji Dịkwuo Ahịa Ezumike | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 1, 2013 Tuesday, January 12, 2021 Douglas Karr
Ndi akwukwo na Volusion na-projecting a 20% mmụba na ahịa ezumike n'ịntanetị maka obere azụmaahịa dị n'ịntanetị nke pere mpe ọkara n'oge a!
Kedu ka ị ga-esi nweta ihe kachasị mma n'oge ezumike a dị oke mkpa na-enweghị ọkụ ego gị? Gaa na egwuregwu ahụ nwere atụmatụ siri ike wee ree, ree, ree. Anyị na-achọ ịbanye n'oge kachasị mma nke afọ maka ecommerce. Volusion mepụtara ndụmọdụ ndị a iji bulie ihe ịga nke ọma gị.
onyinye kaadị - gosipụta nke ọma na kaadị onyinye na asambodo onyinye na mbata ụlọ gị wee meere ha otu - ihe karịrị 2/3 nke ndị na-azụ ahịa nyere kaadị onyinye afọ gara aga. Mgbe ị na-eziga kaadị onyinye ma ọ bụ asambodo, tinye igbe dị mma nke enwere ike ịkechi ma nye ya dị ka onyinye. Atụla egwu ịkwụ ụgwọ maka nke a.
Mbupu N'abalị - Na-azụ ndị ahịa oge ikpeazụ site na ịnye ndị ahịa nhọrọ mbupu abalị ka ha nwee ike ịnata ngwugwu ha ọsọ ọsọ. Gwa ndị ahịa na homepage gị ụbọchị ikpeazụ ha nwere ike ịtụrụ ma ka na-anata ngwugwu ha n'oge maka nnukwu ezumike. Lelee n'aka ndị na-eweta mbupu gị iji hụ ma enwere ọnụọgụ ọhụụ ma ọ bụ ego ewepụtara. Ọ bụrụ otu a, ị nwere ike belata ọnụahịa maka azụmaahịa gị na ndị ahịa gị. (Cheta na ụbọchị iri na asatọ nke ọnwa Disemba bụ National Day Shipping Day - kpọrọ ihe. Tụlee ịnye mbupu n'efu na ụbọchị a ka ị nọrọ asọmpi a nso ezumike ahụ. Ọ bụrụ na ị na-ere mba ụwa, gbaa mbọ tinye ọnụego mbufe mba ofesi na saịtị gị.
Mmetụta pụrụ iche - Nye ekele na-ekpo ọkụ ma kwalite ohere ọ bụla na-akpali akpali na peeji ekele gị ozugbo ndị ahịa nyere iwu ma ọ bụ denye aha na akwụkwọ akụkọ gị. Gụnye kaadị n'ime igbe mbupu mgbe ị zigara ndị ahịa iwu ha. Ọ bụrụ na ị nwere oge, jiri aka dee ederede na mwepu ego n’ime. Nke a ga - eme ka ndị ahịa gị nwee mmetụta na - ekpo ọkụ ma na - agba ha ume ịlaghachi maka ndị ọzọ!
Nbudata ulo-ahia - Nye nhọrọ nnata na ụlọ ahịa ma ọ bụrụ na ị nwere ebe mgbere ahịa. Nke a ga - azọpụta gị na ego onye ahịa gị na ebubo ebubo ọzọ.
Ego nkwụghachi n'efu - Tụlee ịnye mbupu n'efu maka ihe ndị eweghachiri. Na-ezu ohi nke a site na akwụkwọ egwu Zappos, mana ọ bụ echiche na-eme ka ndị ahịa nwee obi ike tupu ịpị Zụta ugbu a bọtịnụ. Tụlee ịgbatị oge nlọghachi n'oge oge ezumike iji nyere aka belata isi ọwụwa ozugbo ezumike ahụ agwụla.
Mepụta ngwa ngwa - Ebe a ngụda gị ọdịda peeji nke na homepage na-egosi otú ọtụtụ ụbọchị na-ekpe ruo mgbe mkpa ezumike. Ebe Mbupu deadlines ozugbo na gị PPC ad ederede. Iji maa atụ, nwalee ihe dịka, Mbupu n'efu site na (fanye ụbọchị)!
Mma - Tinye ụfọdụ ụdị ezumike a na-eme ezumike na akara ngosi gị ma ọ bụ na-agba ọsọ mgbasa ozi mgbasa ozi na-ajụ ndị na-eso ụzọ gị na ndị na-eso ụzọ ka ha nyefee ezumike ezumike aha akara ụlọ ọrụ gị. Ideasfọdụ echiche gụnyere ịkọ otu alaka holly n’elu otu n’ime akwụkwọ ozi ma ọ bụ ịgbanwe akara ngosi gị ịgụnye ọkụ ekeresimesi ma ọ bụ okpu Santa. Google na-eme nke a oge niile maka ihe omume dị iche iche ma ọ na-agbakwunye ihe ọchị, mmetụ onwe gị na ika gị. Debe ubochi dika oge ikpebi ka ewepu mgbanwe ezumike gi n’ebe saiti gi, na - echekwa ịchekwa onyonyo na koodu gi n’aho na abia. Chọghị ịbụ onye agbata obi ahụ na-enweghị mgbaghara nke na-ewepụghị ọkụ ha.
Hazie Nkọwa - Jazz ọdịnaya nke nkọwa ngwaahịa gị. Ọmụmaatụ, Onyinye zuru oke nye mmadu obula, ma ndi n’adighi ike ime ihe di ha mma, bụ ihe na-adọrọ adọrọ karịa ịkọwapụta nkọwapụta teknụzụ.
Onyinye Enyemaka - Mepụta ngwugwu ma ọ bụ nkata onyinye nke ngwaahịa gị ma mepụta otu ụdị aha maka ha. I nwekwara ike itinye ngwungwu ndị a na ngalaba ndị ọzọ ị nwere. Kwuo maka ire ere!
Personalization - Kwe ka ndị ahịa gị tinye ihe onyinye onyinye pụrụ iche n’elu ịtụ ahịa. Can nwere ike ma mee ka ha tinye nke a na ndetu iwu ma ọ bụ mepụta mpaghara omenala na peeji ndenye ọpụpụ gị maka mmetụ ahụ ọzọ. Nye ha ihe ndi ozo tinye na ihe ndi ahia gi, dika ocha o bu dika okike, ma o buru na o kwesiri.
Nyeghachi - Gbalịa mkpọsa ebe ị nyere onyinye pasent ụfọdụ nke ire ere na ọrụ ebere mpaghara, dị ka Machị nke Dimes. Onye ọ bụla nwere mmasị inyeghachi, yabụ mee ka ọ dịrị ndị ahịa gị mfe ime ya.
Ezumike ezumike - Tụlee ịnye nkwalite ebe ndị ahịa na-enweta kaadị onyinye na mgbakwunye na ọnụahịa ego ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye ahịa ejiri $ 50 mee ihe, ha na-enweta kaadị onyinye $ 5. Ọ bụrụ na ha emefu $ 100, kaadị onyinye 10 $, wdg. Nke a bụ ụzọ dị mma iji mee ka ndị ahịa laghachi n’ụlọ ahịa gị.
Onyinye onyinye - Nye onyinye nbudata ma ọ bụ belata ọnụahịa iji nyere ndị na-azụ ahịa aka na tuo. Ma gbaa mbọ hụ na i bujuru akwụkwọ na teepu!
Ego Ego - Inye ego pere mpe maka Black Friday (ụbọchị mgbe Ekele) na Cyber ​​Mọnde (Monday mbụ mgbe Ekele). Ndị a bụ nnukwu ụbọchị maka ịntanetị.
Gwuo egwu - Gbalịa mkpọsa ebe ị zoo obere ihe oyiyi nke ihe, dị ka akara ngosi gị, nke miri emi na otu ibe gị. Nye onyinye ụfọdụ ndị ọrụ na-achọta ya mbụ. Nke a ga - agba ndị mmadụ ume ịnyagharịa na saịtị gị niile ma kpughee ha na ngwaahịa gị.
email Marketing - Ziga email nye ndị ahịa gị niile na ekele pụrụ iche na-ekele ha maka azụmaahịa ha. Nke a ga-echetara ha ịkwụ ụgwọ nleta gị na saịtị gị mgbe ị na-achọ onyinye. Sere ụgbọ ibu gị ahapụrụ kwa izu ma zipụ ihe nchetara ndị ọrụ a ka ha laghachi ma mezue nzụta ha. Chetara ha akwụkwọ ndebanye aha gị iji mee ka ọnụ ọgụgụ kọntaktị ị nwere. Cheta, ndị ahịa ugboro ugboro dị ọnụ ala karịa iji nweta ndị ọhụrụ. Mgbe ndị ahịa mechara zụta ihe mbụ ha, zigara ha akwụkwọ akụkọ pụrụ iche nke na-egosipụta ngwaahịa gị niile a ma ama ma na-ewelata ego "ndị ahịa ọhụụ". Oge agawala ịmalite ịmalite iguzosi ike n’ihe nye ndị ahịa.
Live Nkwado - Kwụpụ nkwado gị site na itinyekwu oge na nkata ndụ yana site na ekwentị iji zaa ajụjụ ọ bụla. Gbasaa ụdị agwa gị na ebe ọ bụla onye ahịa na-emetụ ya. Ọ bụrụ n ’ị nwere ebe ana-akpọ oku, gbaa mbọ hụ na ị na-aza ekwentị site na iji kelee gị ma ọ bụ tinye ozi akara na modul nkata gị. Ọbụna ndị ahịa na-enweghị afọ ojuju enweghị ike ịjụ ịchọrọ ihe ọma. Mara usoro sistemụ ekwentị gị ma ọ bụrụ na ịnabeghị - ụfọdụ ndị na - ahọrọ ịkpọ ma tinye usoro ha mgbe ha jụsịrị ajụjụ ole na ole.
Vertgwọ Mgbasa Ozi - N'oge ezumike, mezie mkpọsa PPC gị ka ọ gụnye isiokwu metụtara ezumike, dị ka onyinye or onyinye. Upkwalite gị asọmpi PPC bidding. Ndị ahịa nwere ike na-achọ ka ha mefuo obere ego iji chọta ngwaahịa zuru oke, yabụ na ị ga-adị njikere itinyekwu obere ego site na ịwelite obere ụbọchị gị na PPC. N'iji tụnyere ịzụ ahịa na ịrị elu, edere nke ọma, ederede mgbasa ozi nwere ike zuo ire n'aka ndị asọmpi. Jide ederede PPC gị na isiokwu gị iji zube ndị na-azụ ahịa na-achọ echiche onyinye maka ndị ha hụrụ n'anya. Dịka ọmụmaatụ, jiri isiokwu dị ka "onyinye maka papa m" yana akwụkwọ mgbasa ozi nke gụnyere aro dịka, "Anyị nwere onyinye ezumike maka ụmụ nwoke dịka elekere, gọọlfụ golf na tie tacks maka obere."
search Engines - Nyefee map saịtị gị n'oge na-adịghị anya site na ngwaahịa na edemede ọhụụ ka igwe na - achọpụta ihe nwere ike ịtụpụta ma debe ha tupu oge ere ere apụ. Ike ma gbanwee meta nkọwa na edemede na ngwaahịa ndị a ma ama iji tinye isiokwu dị mkpa ga-enyere aka na peeji nke ibe gị na ibe ngwaahịa. Gbanwee isi okwu ulo gi na / ma obu oyuyo gosi ndi n'acho ahia na igha zuru oke ebe ha ga enweta onyinye, ijide n'aka itinye mkpuru okwu ndi yiri ya dika mbu, ka ighara ida n'ala na onodu gi.
Gaa na Social Media - Redesign mgbasa ozi mgbasa ozi gị, dị ka Twitter na Facebook, ka ọ wee nwee iwe na akara. Kekọrịta ego gị na igosipụta ngwaahịa gosipụtara kwa ụbọchị site na mgbasa ozi mmekọrịta - nke a na -emepụta echiche nke ịdị ngwa ma na-enyere aka ịgbatị iru gị n'ịntanetị. Gbalịa mgbasa ozi mgbasa ozi ebe ị gwara ndị ahịa ka ha nyefee vidiyo, foto ma ọ bụ leta na ihe mere ha ji enwe ọ enjoyụ na ngwaahịa na azụmaahịa gị. Nye ndị zaghachiri ego na ngwa ahịa ha họrọ, wee jiri amaokwu ha na onyonyo na weebụsaịtị gị. Cheta, ịgba akaebe buru ibu! Gbalịa mee ntuli aka na ntanetị gị, jụọ, sị, "Ọ bụrụ na ịnwere otu ihe (tinye aha ụlọ ahịa gị), gịnị ga-abụ?" Mgbe ahụ soro site na ịnye ndị nzaghachi ego na ngwaahịa ha kwuru!
Budata ndepụta niile nke Volusion Atụmatụ Ecommerce 101 iji bulie ire ahịa ezumike!
Cheta na: Anyị etinyela njikọ njikọta anyị maka Volusion n'isiokwu niile. Volusion bu ihe mbu ahia ecommerce nke obere na ulo ahia. Kemgbe afọ 1999, ọtụtụ puku ụlọ ọrụ ejirila Volusion mee ihe ịga nke ọma n'ịntanetị, na nkezi ndị ahịa na-ere asọmpi ahụ, 3: 1.
Tags: email ecommerceecommerce email ahịaegwuregwu gam akporokaadị ecommerceecommerce ndụ na-akwadoahia ecommerceecommerce ọchụchọ azumecommerce mmadụ mgbasa oziecommerce azịzaNhazi nke onweezumike ecommerce azumezumike ecommerce na-arị eluezumike atụmatụvolluji
Lọ Ọrụ Sọftụwia Malaysia
Nov 4, 2013 na 3:02 AM
Echere m na usoro ndị a ga-aka mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbawanye ahịa ezumike gị. O doro anya na ọ ga-enyere ndị na-agba saịtị ezumike aka.